NextMapping | Ọzụzụ Ndị ọzọ
Ọzụzụ Ndị ọzọ
Obi ò siri gị ike maka ọdịnihu? Are nwere obi uto banyere ohere ị nwere maka gị na azụmahịa gị n'ọdịnihu? Ndi ụlọ ọrụ gị nwere usoro na ngwaọrụ iji bute mgbanwe?
Ndị anyị na ndị na-ahụ maka ndị na-ahụ maka NextMapping will ga-enye gị usoro, nkwado na nduzi iji mepụta ọdịnihu gị kachasị mma. Onye ọ bụla na - eme nke ọma na - eji onye na - azụ ahịa ma ọ bụ onye na - ahụ maka ndị isi na - eduzi ndị nkuzi / ndu.
Ndị na-azụ ahịa azụmaahịa anyị NextMapping rtified agbaara agba ga-eso gị rụọ atụmatụ, mee ka ọdịnihu nke ọrụ uche gị ma nyere gị aka ịzụlite amamihe dị gị mkpa ka ị wee nwee ọganiihu na oge mgbanwe ọsọ.
Zoo ndị nkuzi NextMapping ™ anyị
Mara na Onalytica # 1 Future nke Work influencer nke mere akwụkwọ edemede nke akwụkwọ 9 tinyere mbipụta nke abụọ nke “NextMapping ™ - Aniticape, atenyagharịa na Mepụta Ọdịnihu nke ỌrụYa na ibe akwụkwọ ọrụ. Aha akwụkwọ ndị ọzọ gụnyere “Nduzi nke Onye ndu mgbanwe - Ngbanwe Ingbanye Inwe Egbe Puru Ibu"(Wiley 2015),"Xzọ 101 iji mee ka Mbido X, Y na Zoomers nwee obi ụtọ na Ọrụ"(2010) na akwụkwọ 4 ndị ọzọ gbasara ikike idu ndú kachasị mkpa iji nwee ọdịnihu ọrụ.
E gosipụtara ọrụ ọdịnihu Cheryl ịbụ onye ndu n'ime akwụkwọ dịka Huff Post, Forbes, IABC Magazine, Law Magazine, Metro New York, Magazine Mgbasa Ozi, Readers Digest, CBS Online, NBC Online, Fox Online na ndị ọzọ. Kemgbe ihe karịrị afọ iri abụọ Cheryl wuru aha ọma maka ịnye ndị ahịa uru pụrụ iche gụnyere AT&T, Bell Mobility, Omnitel, Gartner, British Telcomm, Manulife, yana ụlọ ọrụ dị n'etiti na ndị ọchụnta ego na ụlọ ọrụ ndị gụnyere teknụzụ, ahụike, ọrụ ugbo ego, mkpuchi na ndị ọzọ.
Jikọọ anyị taa!
Crystal Metz bụ ezigbo ọchụnta ego na onye isi otu. Obi dị anyị ụtọ inwe Crystal dịka onye ọchụnta ego anyị lekwasịrị onye nkuzi NextMapping ™.
Dị ka onye nchịkwa NextMapping ™, Crystal na-eweta ụgbọala, ịnụ ọkụ n'obi na ndekọ ndekọ pụtara iji nyere ndị ahịa aka ịmepụta ihe ịga nke ọma, ihe mgbochi na-aga nke ọma ma mepụta usoro ọhụrụ iji mepụta ihe na-esote.
Ọ bụ onye nwe Crystal Metz Insurance, ụlọ ọrụ mkpuchi # 1. Kemgbe mmalite mkpuchi mkpuchi Crystal Metz akarịala ndị na-asọmpi ya, n'okpuru nduzi nke Crystal na-aga n'ihu na-eto eto n'agbanyeghị ịnọ na ụlọ ọrụ na-agbanwe ngwa ngwa n'afọ karịa afọ. Crystal kwuru ihe ịga nke ọma ya dị ka onye ọchụnta ego na amụrụ ma zụlite ya na ezinụlọ ọrụ ugbo. N'oge ọ dị obere, ọ mụtara nka maka njikwa ọrụ, ịrụsi ọrụ ike na nnọgidesi ike yana inwe agụụ maka azụmahịa.
Onye ọchụnta ego site na nwata, n'oge mmalite 20 ya, o mepere ụlọ ọrụ nke ya, CENTURY 21 Medellis Realty. Nnukwu a mere ka Crystal mụta ngwa ngwa, na-eme mgbanwe maka na-eduga otu otu ma na-aghọta akụkụ dị mkpa nke azụmahịa. N'ime afọ 5 ọ gbara ọsọ ma rụọ ọrụ aha ụlọ ya, uto ya na ihe ọmụma banyere ihe ị ga-eme na ihe ị na-agaghị eme bụ ihe mmụta mụtara na echefubeghị. Crystal gbanwere ihe ọchụnta ego ya na mkpuchi mkpuchi wee mepee mkpuchi Crystal Metz. Ọ na-ekwenye na ihe ịga nke ọma ya na ndị otu ya - ọ wulitere azụmahịa ya site na ịchọta ndị ziri ezi na ịkekọrịta onye ndu. Ndị otu ya na-eguzosi ike n'ihe na itinye aka bụ otu n'ime mmezu nganga ya dị ka onye ọchụnta ego. Leadershipkpụrụ nduzi Crystal bụ ijide atụmanya na ụkpụrụ dị elu mgbe ị na-azụ ma na-eduga ndị otu ya na ọdịbendị ndị ọzọ.
Dị ka onye na-esote nkuzi Crystal's NextMapping ™ maka ihe ịga nke ọma yana ilekwasị anya na ndị mmadụ bụ onyinye kacha ukwuu. Ọ na - agbagha ndị mmadụ inyocha ihe na-eme ha obi ụtọ dị ka onye ọchụnta ego na dịka mmadụ ma nyezie mmụọ nsọ na atụmatụ iji nyere gị aka ịga.
Ihe omuma ya bu inyere ndi mmadu aka ma wulite ikike ha, nweta obi ike, nyere ha aka itolita ma nweta ihe anaghi ekwe omume.
Crystal na-enyere ndi ahia aka na nyocha nke ahia, ahia, ihe ndi otu na atumatu atumatu. Dị ka onye nchịkwa NextMapping ™ Crystal ga - enyere azụmahịa gị aka ito eto nke ị na-echeghị. Ọ na-eweta oke uru dị ka onye na-azụ ahịa ọchụnta ego nke na-aga ije ma nwee ezigbo ihe ịga nke ọma.
Iji chọpụta ihe ndị ọzọ gbasara ịchụ ahịa na Crystal ka ị gaa ebe a: https://nextmapping.com/nextmapping-coaches/entrepreneur-coaching/
Dị ka onye nchịkwa nchịkwa NextMapping Reg Reg nwere ezigbo ihe ndabere dị ka onye isi ndị okenye na azụmaahịa ihe karịrị afọ 25.
Nzụlite ya gụnyere ọrụ dị ùgwù na ụlọ ọrụ ụlọ akụ, mmepe usoro e-azụmaahịa maka ụdị ahịa azụmaahịa abụọ kachasị na Canada (Kasị Mma na Futurelọ ahịa Ọdịnihu) yana onye ọchụnta ego na onye nwe ụlọ ọrụ atọ na-aga nke ọma.
Reg nwere azụmaahịa buru ibu na ahụmịhe nyocha gụnyere nhazi na mmepe, nyocha esemokwu na njikwa, onye isi na mmepe otu na usoro e-azụmaahịa na mmejuputa e-commerce nke ọma.
Agụmakwụkwọ Reg gụnyere Master of Arts Degree in Conflict Analysis & Management na Royal Roads University.
O kwenyesiri ike na-enyere aka ịgbanwe mmepe na uto nke ulo oru na ndị ọrụ na ọkwa niile site n'inye azịza ọhụụ, ihe okike nke na-abụghị naanị kpalie ma mee ka arụmọrụ na uto dị elu ma na-enyekwa ụlọ ọrụ ohere ịchọpụta, mepee ma tọhapụ ikike nke ọ bụla ndị ọrụ.
Mmasị Reg bụ inyere ndị isi aka ịbawanye njikọ aka yana inyere ndị isi nọ n'etiti ọkwa ịrịgo n'ọkwá ndị isi.
Ndị isi na ndị otu otu Reg na-enye ọzụzụ oge niile na ọ na-enye ọnọdụ dị oke mkpa, nghọta na ngwaọrụ iji nyere ha aka ịga nke ọma n'ebe ọrụ.
'Skpụrụ Reg dị ka onye nchịkwa NextMapping is bụ kpọmkwem, nyocha na usoro na-elekwasị anya n'inyere ndị mmadụ aka inwe ihe ịga nke ọma.
Ashley Farren bụ onye ntụzi aka na onye na-ahụ maka NextMapping rtified. Obi dị anyị ụtọ inwe Ashley na ndị otu NextMapping ™.
Ashley nwere nghọta miri emi, usoro na mmekorita. O nwere nnukwu ihe omuma banyere ihe ịga nke oma n’ime atumatu atumatu nke ulo oru uwa nile.
Akụkọ gbasara ọrụ ya gụnyere afọ 12 na Singapore n'ime ọrụ HR Business Onye Mmekọ na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ Multinational gafee ọtụtụ ọrụ dị iche iche gụnyere Hi Tech, FMCG, Mining.
Ruo afọ 6, Ashley rụrụ ọrụ maka Autodesk, na-ebute ọrụ HR maka ọrụ Global Engineering gụnyere nnukwu saịtị abụọ dị na Singapore na Shanghai (ndị ọrụ 1200) na ndị otu na US & Europe.
Tupu nke a, ọ nọrọ afọ 12 na Unilever na-arụ ọrụ n'ofe Eshia, Africa, Middle East na-akwado ọtụtụ ọrụ azụmaahịa (gụnyere IT (Infrastructure na Business Systems) / Ahịa / Ahịa, Ahịa na dịka Onye njikwa mmụta na mmepe.
N’oge a, o kwadobere ihe banyere ihe owuwu n’otu mpaghara iwulite ọrụ aka ọrụ mba ụwa, na ijikwa mmejuputa ihe n’ofe Africa na Middle East, na-ahụkwa maka ịkwado nnukwu nnabata.
N'oge ọrụ ụlọ ọrụ 22 afọ ya, Ashley emeela ka nhazi ya nwee nnukwu mgbanwe nhazi gụnyere ọtụtụ nhazi / nhazi. O nwere usoro ndu mgbanwe na mmemme, usoro amamịghe ya na usoro njikwa arụmọrụ ya, emejuputa ihe di iche na ntinye ya na achikota ndi isi na ndi isi ya, mmemme itinye aka na ndi mmadu, mere ka atumatu guzobe usoro HR.
Hélène Hamilton bụ onye nkuzi amaara ama nke ICF ma weta ahụmịhe dịgasị iche iche na ọtụtụ atụmatụ ndị ahịa na-aga nke ọma na otu NextMapping ™.
Nzụlite ya gụnyere ihe karịrị afọ 30 nke ahụmịhe ochichi tinyere afọ 15 dị ka onye isi nchịkwa. Hélène wetara nka na nhazi ya na ihe ndi mmadu. Ndị ahịa ya nwere ekele maka ike ha iji nyere ha aka ịmepụta ihe ndị mejupụtara na ụwa na-esiwanye ike.
Ọ bụ ya dere akwụkwọ “Ihe Kachasị Ezochiri Anya na Enggba Ndị Ọrụ” (2017) ma gbaara ya akwụkwọ na profaịlụ Nova ™ yana ngwaọrụ ndị ọzọ.
Industlọ ọrụ ndị ọ na-arụ ọrụ gụnyere ahụike, ngalaba ọha, agụmakwụkwọ na obere azụmaahịa.
Ihe omumu ihe omumu nke Hélène na ndi nkuzi ya nwere obi uto na ha nwere ike inweta onodu ngwa-ngwa, echiche ya na uzo ya maka igha ndi isi na ndi otu aka iwulite ikike ha n’iji odi njikere ugbua.
Njikere ijikọ anyi na ịrụ ọrụ na ndị nkuzi na ndị ndụmọdụ anyị NextMapping?
Anyị ekpuchiela gị - gbasapụ, anyị ga-achọ ijikọ gị.
Ọdịnihu nke Ọrụ Ntanetị Ndị Ntanetị